Tsy hiampanga ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix. - Fa Mamaly Ny
bluetooth mitodika irery
iPad tsy afaka mifandray amin'ny tambajotra wifi
ipad mihidy mifandray amin'ny iTunes fix
Tsy hiampanga ny iPhone-ko! Ity ny The Real Fix.
Rehefa tsy handoa vola ny iPhone dia raharaha lehibe izany. Mpiasa Apple taloha aho, ary nandritra ny fotoana niasako tao amin'ny Apple Store, ny fanitsiana ny olana amin'ny famandrihana iPhone dia ampahany lehibe amin'ny asako isan'andro. Ny vaovao tsara dia izany ny ankamaroan'ny olana amin'ny famandrihana iPhone dia azo alamina ao an-trano . Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hasehoko anao ny fomba fanamboarana iPhone izay tsy handoavam-bola , tsikelikely.
Zahao ny tariby taratrao raha misy fahavoazana
Andramo ny charger iPhone tsy mitovy
Aosory ny Gunk avy any amin'ny seranan-tsambo famandrihana iPhone
Apetraho amin'ny Mode DFU ny iPhone-nao ary avereno
Amboary ny iPhone-nao
Fantaro izany alohan'ny hanombohanao
Iray amin'ireo fanontaniana mahazatra indrindra azon'ny Apple techs rehefa tsy handoa vola ny iPhone dia ity: 'Raha tsy hividy vola ny iPhone-ko dia mila bateria vaovao ve aho?'
Na eo aza ny zavatra hovakinao amin'ny tranokala maro, ny valin'ity fanontaniana ity dia tsia! Betsaka ny fampahalalana diso eo, ary izany no iray amin'ireo antony lehibe naniriako hanoratra ity lahatsoratra ity.
efijery amin'ny iphone 6 tsy mandeha
Amin'ny maha teknolojia Apple taloha ahy misy traikefa miasa miaraka amin'ireo iPhone an-jatony izay tsy handoa vola, azoko lazaina aminao izany ny fanoloana batery no zavatra tsy mety tokony hatao .
Ny marina dia ny ankamaroan'ny fotoana dia ny an'ny iPhone anao rindrambaiko - tsy fitaovana finday - izay manakana ny iPhone tsy handoa vola. Raha tsy handidy ny iPhone-nao, 99% amin'ny fotoana, dia hisolo ny bateria aotra vokany!
Ary, raha misy dia olana eo amin'ny sehatry ny fitaovana, azo inoana kokoa fa ny seranan-tsambo ihany no manahirana azy - fa mbola tsy eo izahay.
Raha aleonao mijery fa tsy mamaky dia hitarika anao amin'ny fanamboarana ny lahatsarinay YouTube.
Ahoana no manamboatra iPhone tsy handoa vola
1. Hard Reset ny iPhone
Indraindray ny vahaolana dia tsotra toy ny famerenana mafy ny iPhone. Izany no zavatra voalohany hataon'ny Apple tech ao amin'ny Apple Store, ary mora atao ao an-trano izany. Ity no fomba:
Ahoana ny fomba hamerenana mafy ny iPhone
Ahoana no fomba hamerenana mafy
iPhone 6S, 6S Plus, SE, ary modely taloha Tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra ary ny Bokotra an-trano miaraka mandra-pahatongan'ny sary famantarana Apple eo amin'ny efijery, ary avelao handeha.
iPhone 7 sy 7 Plus Tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra ary ny bokotra midina miaraka mandra-pahatongan'ny sary famantarana Apple eo amin'ny efijery, ary avelao handeha.
iPhone 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, ary XR Misy dingana telo: 1. Tsindrio haingana ary afaho ny bokotra ambony . 2. Tsindrio haingana ary afaho ny bokotra midina . 3. Tsindrio ary tazomy ny bokotra herinaratra (antsoina hoe 'bokotra an-kilany' amin'ny iPhone X) mandra-pisehoan'ny Apple logo amin'ny fampisehoana, ary avelao handeha.
Torohevitra teknolojia Apple: Ny lesoka # 1 ataon'ny olona raha manandrana mamerina manamboatra mafy ny iPhone-ny dia izany tsy tazonin'izy ireo maharitra ny bokotra. Amin'ny iPhone 8 sy X kosa, alao antoka fa manery haingana ny bokotra roa voalohany ianao ary mitazona ny bokotra herinaratra mandritra ny fotoana lava. Indraindray mety maharitra 20 segondra na mihoatra ny fizotrany!
mijery ahy lavitra izy
Raha tsy mandeha izany dia aza manahy! Hisitrika amin'ny fanamboarana fitaovana isika amin'ny dingana manaraka.
2. Hamarino raha misy simba ny tariby taratrao
Diniho akaiky ny lafiny roa amin'ny tariby USB ampiasainao hampihenana ny iPhone. Apple's helatra Ny telegrama dia mora zakaina, indrindra amin'ny faran'ny izay mifandray amin'ny iPhone. Raha mahita famantarana hitafy anaovanao ianao dia mety ho tonga ny tariby vaovao.
Ahoana no ahafahako milaza raha ny tariby misy taratrao no antony tsy handoavan'ny iPhone?
Raha tsy misy ny fahasimbana hita eo ivelan'ny tariby dia manandrama mametraka ny iPhone ao anaty port USB amin'ny solosainao mba handidy fa tsy hampiasa ilay adapter rindrina miaraka amin'ny iPhone-nao. Raha efa mameno ny iPhone amin'ny alàlan'ny solosainao ianao dia andramo ny mampiasa adapter rindrina. Raha miasa amin'ny toerana iray izy fa tsy amin'ny iray hafa, tsy ny taribinao no olana.
Mety ho toa miharihary izany, fa indraindray ny fomba tsara indrindra hamaritana raha manana 'tariby ratsy' ianao dia ny andramo ny famandrihana ny iPhone amin'ny alàlan'ny tariby sakaizanao . Raha miverina amin'ny fiainana tampoka ny iPhone aorian'ny ampidiranao azy dia hitanao ny antony tsy hiampangan'ny iPhone anao - tariby misy lesoka.
Aza adino ny momba ny fiantohana ny iPhone!
Raha mbola eo ambany fiantohana ny iPhone-nao dia rakotra ny tariby USB (sy ny zavatra hafa rehetra ao anaty boaty iPhone)! Apple dia hisolo maimaimpoana ny tariby taratrao, raha mbola amin'ny endrika mendrika izy io.
Azonao atao ny manangana fiverenana ao amin'ny tranokalan'ny Apple's support na miantso ny Apple Store anao eo an-toerana mba hanao fotoana amin'ny Genius Bar. Raha manapa-kevitra ny ho any amin'ny Apple Store ianao, dia tsara foana ny mifanao fotoana ao amin'ny Bar Genius alohan'ny hidiranao. Amin'izany, tsy mila miandry milahatra ianao - farafaharatsiny tsy ela.
Ny tariby antoko faha-3 dia afaka mitaky olana amin'ny famandrihana iPhone
Ny iray amin'ireo antony mahazatra indrindra mahatonga ny tsy handoavan'ny iPhone dia avy amin'ny tariby mpanohana fampiasa iPhone andiany faha-3 ambany fividianan'ny olona amin'ny tobin-tsolika. Eny, lafo ny tariby Apple, saingy amin'ny zavatra niainako, ireo $ 5 mandondona ireo dia tsy mahazaka toy ny tena izy. Ery dia tsara any ivelany - tsy maintsy fantarinao fotsiny izay safidinao.
Taratasy avo lenta sy lafo vidy Aza misy!
Raha mitady a Taratasy famerenam-bidy iPhone avo lenta maharitra kokoa noho ny an'i Apple izy io, jereo ireo ankafizinay ao Amazon. Tsy taribin-tsolika mora vidy ireo izay ho tapaka ao anatin'ny herinandro. Tiako ilay tariby Lightning 6-tongotra satria lava amiko ny afaka mampiasa ny iPhone am-pandriana.
3. Andramo ny charger iPhone tsy mitovy
Moa ve ianao miantoka ny iPhone amin'ny alàlan'ny fampidirana azy amin'ny rindrina, amin'ny fampiasana charger fiara, amin'ny dabilin'ny mpandahateny, amin'ny laptop-nao, na amin'ny fomba hafa? Misy betsaka amin'ny fomba samihafa handefasana iPhone.
iphone 6 plus mihidy
Aza adino fa ny rindrambaiko iPhone anao no milaza hoe 'Eny' na 'Tsia' amin'ny famandrihana rehefa mifandray amin'ny fitaovana fanampiny ny iPhone. Raha mahita ny fiovaovan'ny herinaratra ny rindrambaiko, dia hanakana ny iPhone tsy hijanona ho fepetra fiarovana izany.
Ahoana no ahafahako milaza raha ny charger-ko no antony tsy handoavam-bola ny iPhone-ko?
Hanao zavatra mitovy amin'ny nataonay izahay rehefa nijery ny tariby tselatrao. Ny fomba tsotra indrindra hahitana raha ratsy ny charger-nao dia ny manandrama iray hafa. Hamarino tsara fa manandrana mihoatra ny iray ianao satria mety handoa vola be ny charger.
Raha tsy hiasa amin'ny adapter rindrina ny iPhone dia andramo ny mampiditra azy ao anaty port USB amin'ny solosainao. Raha tsy handoa vola amin'ny solosaina ianao dia andramo ny manantona azy amin'ny rindrina - na manandrana port USB hafa amin'ny solosaina. Raha miampita amin'ny adaptatera iray ny iPhone fa tsy ilay iray hafa dia ny charger-nao no olana.
Misy charger haingam-pandeha avo lenta any, saingy mila mitandrina ianao
Raha mila charger vaovao ianao dia zahao ireo charger izay amporisihanay hampiasa ilay rohy mitovy amin'ny etsy ambony (ho an'ny tariby). Ny amperage ankatoavin'ny Apple for charger iPhone dia 2.1 amps. Tsy toy ny lozisialy antoko fahatelo izay mety hanimba ny iPhone-nao, hiampanga haingana sy azo antoka ny iPhone ireo.
(Ny charger iPad dia 2.1A ary nilaza i Apple fa tsara ho an'ny iPhones.)
Torohevitra: Raha manandrana mampiasa vola amin'ny alàlan'ny kitendry Apple na hub USB ianao dia manandrama mametraka ny iPhone mivantana ao amin'ny iray amin'ireo port USB an'ny solosainao. Ny fitaovana rehetra ampidirina anaty hubs USB (sy ny kitendry) dia mizara herinaratra voafetra. Hitako manokana ny olan'ny famandrihana iPhone nitranga satria tsy ampy ny hery fivezivezena.
4. Esory ny Gunk avy any amin'ny seranan-tsambo famandrihana iPhone
Mampiasà jiro fanamoriana ary jereo akaiky ny seranan-tsambo famenoana eo ambanin'ny iPhone-nao. Raha mahita potipoti-javatra na basy ao ianao, dia mety hanakana ny tariby tselatra tsy hanao fifandraisana matanjaka amin'ny iPhone-nao. Betsaka ny mpampitohy ao (ny tariby misy helatra dia 9), ary raha voasakana ny tsy mety dia tsy handoa vola mihitsy ny iPhone-nao.
Raha mahita lint, basy, na potipoti-javatra hafa ianao ao amin'ny seranan-tsambo misy ny iPhone dia tonga ny fotoana hamafana azy. Mila zavatra tsy hitarika fiampangana herinaratra na hanimba ny elektronika ao ambanin'ny iPhone-nao ianao. Ity ny fikafika:
Makà borosy nify (iray izay mbola tsy nampiasanao hatrizay) ary esory moramora ny seranan-tsambon'i iPhone. Fony aho tany Apple, dia nampiasa borosy anti-statika fatratra izahay hanao an'io (izay azonao atao any Amazon tsy misy dikany), fa ny borosy nify ihany koa no miasa.
Fiatrehana fahasimbana amin'ny rano
Ny iray amin'ireo antony mahazatra indrindra mahatonga ny iPhone tsy hitaky vola dia ny fahasimban'ny rano. Ny fahasimban'ny rano dia mety hampihena ny fifandraisana ao amin'ny seranan-tsambo misy ny iPhone ka hiteraka olana isan-karazany amin'ny iPhone. Na dia efa nataonao maina aza ny seranana sy nongotanao ny basy, indraindray dia efa natao ny fahavoazana.
5. Ataovy ao amin'ny DFU Mode ny iPhone-nao ary avereno
Na dia tsy hiakatra aza ny iPhone dia mety handeha ihany ny famerenana amin'ny laoniny DFU! Nofoananao ny mety hisian'ny a tsotra olan'ny rindrambaiko ary nojerena ny tariby USB, charger-nao, ary ny iPhone mihitsy, ka tonga ny fotoana hanaovana ezaka farany - averina amin'ny laoniny ny DFU. Ny famerenana DFU dia karazana famerenana manokana (rehefa ianao indray ny iPhone-nao, hamafa ny zava-drehetra ao aminy ianao ary hamerina azy io amin'ny toeran'ny orinasa) izay afaka mamaha olana goavana momba ny rindrambaiko - RAHA misy izy ireo.
Zahao ny lahatsoratro momba izany Ahoana ny fomba hamerenan'ny DFU iPhone hianatra ny fomba fametrahana ny iPhone ao anaty maody DFU, ary miampita ny rantsan-tanananao alohan'ny hanandramanao. Rehefa niasa tamin'ny Apple aho, ity no zavatra voalohany andramako, na dia toa simba aza ny telefaona. Misy vintana kely ihany ny famerenan'ny DFU famerenana amin'ny laoniny ny iPhone tsy miasa intsony.
Raha tsy mandeha izy dia miverena eto hianatra momba ny safidy fanamboarana lehibe mety tsy fantatrao.
6. Amboary ny iPhone
Raha mankany amin'ny Apple Store ianao hanamboarana ny iPhone ary nisy fatiantoka na fatiantoka ara-batana amin'ny telefaona, ny hany safidy azon'izy ireo atolotra dia ny manolo ny iPhone manontolo. Raha tsy manana AppleCare + ianao, ity dia mety ho lafo, haingana. Raha nanana sary, horonan-tsary, na fampahalalana manokana momba ny iPhone ianao ary tsy handoa vola ny iPhone dia hilaza i Apple fa lasa mandrakizay izy ireo. Soa ihany fa misy safidy hafa:
Safidy fanamboarana hafa
Raha mila manamboatra ny iPhone androany ianao, hanin-kotrana dia serivisy fanamboarana tsara, mora vidy, eo an-toerana. Hihaona aminao any an-trano na amin'ny toerana tianao izy ireo ao anatin'ny 60 minitra.
Puls dia manome garantie mandritra ny androm-piainany amin'ny ampahany sy asa, ary mandoa ihany ianao rehefa vita ny fanamboarana. Izy ireo koa dia manolotra ny safidy hanamboarana ny seranan-tsambo misy ny iPhone sy ireo singa kely kokoa izay tsy ho voakasik'i Apple. Misy vintana hahafahanao mamerina ny angon-drakitrao sy manangom-bola!
Mangarahara feno: Mahazo saram-pandefasana izahay raha misafidy ny manamboatra ny iPhone amin'ny Puls. Izany dia nilaza fa tena mino aho fa izy ireo no safidy tsara indrindra sy mora indrindra ho an'ny olona maro.
Niampanga indray ny iPhone!
Manantena aho fa niverina tamin'ny laoniny ny iPhone-nao ary handeha hiverina amin'ny sarany feno ianao. Tiako ny maheno anao momba ny zavatra niainanao nanamboatra ny olana amin'ny famandrihana iPhone, ary eto aho manampy eo am-pandehanana.
nofinofy bevohoka midika